ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုင်စင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်ဆိုသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲအားအသုံးပြုခြင်း (သို့) ပြန်လည်ဝေငှခြင်းတို့ကိုထိန်းချုပ်သောဥပဒေရေးရာကိရိယာတစ်ခုပုံနှိပ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မပါဘဲဖြစ်စေ စာချုပ်ပါဥပဒေအရဖြစ်သည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရဆော့ဖ်ဝဲလ်အားလုံးသည်မူရင်းကုဒ်နှင့်အရာဝတ္ထုကုဒ်နှစ်ခုလုံးတွင်မူပိုင်ခွင့်ကိုကာကွယ်ထားသည်။ ထိုဆော့ဖ်ဝဲကိုအမေရိကန်အစိုးရမှတီထွင်သူ မဟုတ်လျှင်၎င်းတွင်မူပိုင်ခွင့်မရနိုင်ပါ။ မူပိုင်ခွင့်ရထားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူများသည်သူတို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုအများဆိုင်သို့လှူဒါန်းနိုင်သည်။ ပုံမှန်ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်လိုင်စင်ရသူအားပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူအားခွင့်ပြုချက်ပေးပြီးဆော့ဖ်ဝဲမိတ္တူတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက် ပို၍ အသုံးပြုရန်ထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုသည်မူပိုင်ခွင့်အောက်ရှိဆော့ဖ်ဝဲပိုင်ရှင်၏သီးသန့်ရပိုင်ခွင့်များကိုမူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အခွင့်အရေးအားလုံးကိုပေးခြင်း ထောက်ပံ့ငွေသည်အခွင့်အရေးများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ လိုင်စင်အသစ်ထုတ်ပိုင်ခွင့်အပါအဝင်စီးပွားဖြစ်ခွင့်ပြုခြင်း၊ လိုင်စင်လိုက်ဖက်တဲ့ခွင့်ပြုပါဝင်သည်။ ထောက်ပံ့ငွေအခွင့်အရေးများကိုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းတားမြစ်သည်။ စီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောအသုံးပြုရန်အတွက်သာလျှင်ထောက်ပံ့ကြေးမူပိုင်ခွင့်လစ့်နှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မိရိုးဖလာမူပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှခွင့်ပြုရန်မလိုအပ်ပါ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါ
PD, CC0 MIT, Apache, MPL GPL, AGPL JRL, AFPL စီးပွားဖြစ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ အများပိုင်လိုင်စင်မရှိပါ ပုဂ္ဂလိက၊ internal software
PD, CC0 CC-BY CC-BY-SA CC-BY-NC မူပိုင်ခွင့်၊ အများပိုင်လိုင်စင်မရှိပါ မဖြန့်ချိ
ဖြန့်ဝေထားသောဆော့ဖ်ဝဲအများစုကိုလိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည် (ဇယားကိုကြည့်ရူရန်) မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရဆော့ဖ်ဝဲအတွက်အသုံးများသောအမျိုးအစားနှစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လိုင်စင်ရသူအားအထူးအခွင့်အရေးများပေးသောလိုင်စင်များနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲများ (FOSS) တို့ဖြစ်သည်။ နှစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆကွာခြားချက်မှာဖောက်သည်တစ်ဦးထံမှရရှိသောဆော့ဝဲလ်ထုတ်ကုန်ကိုပြုပြင်ရန်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်အခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အက်ဖ်(FOSS) ဆော့ဖ်ဝဲဖောက်သည်အားရပိုင်ခွင့်နှစ်မျိုးလုံးကိုလိုင်စင်ချထားသည်။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအခွင့်အရေးများကိုလိုင်စင်မပေးသောကြောင့်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုလျှို့ဝှက်ထားသည်။
မူပိုင်ခွင့်ပြုထားသောဆော့ဖ်ဝဲလ်အသုံးပြုခွင့်ကိုကန့်သတ်ခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုပေးခြင်းအပြင်ဆော့ ဖ်ဝဲလိုင်စင်များသောအားဖြင့်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်တွင်ပါဝင်သူများအကြားတာဝန်နှင့်တာဝန်ကိုခွဲဝေပေးသောပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်သည်။ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆော့ဖ်ဝဲအရောင်းအဝယ်များတွင်ဤဝေါဟာရများသည်တာဝန်ရှိမှုကန့်သတ်ချက်များ၊ အာမခံချက်များနှင့်အာမခံချက်ငြင်းဆိုမှုများနှင့် အကယ်၍ ဆော့ဖ်ဝဲသည်မည်သူမဆို၏ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ပါကလျော်ကြေးပေးခြင်းတို့ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ မူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ခြင်း၏အပြင်ဘက်တွင်လိုင်စင်မရှိသောဆော့ဖ်ဝဲသည်အများပိုင်ဒိုမိန်းဆော့ဖ်ဝဲလ်သို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းမရှိ၊ လိုင်စင်မဲ့နှင့်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကုန်သွယ်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်အဖြစ်ကိုင်တွယ်သောဆော့ဝဲလ်ဖြစ်သည်။
Mark Webbink အရ မူပိုင်ခွင့်နှင့်ပတ်သတ်၍ ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုင်စင်နှင့်အခွင့်အရေးများ၊အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း
လိုင်စင် (e.g. BSD license)
လိုင်စင် (e.g. GPL)
မူပိုင်ခွင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း မရှိ ရှိ ရှိ ရှိ ရှိ အလွန်တင်းကြပ်စွာ
တင်ဆက်ခွင့် ရှိ ရှိ ရှိ ရှိ ရှိ မရှိ
ပြသခွင့် ရှိ ရှိ ရှိ ရှိ ရှိ မရှိ
ကူးယူခွင့် ရှိ ရှိ ရှိ မကြာခဏ မရှိ မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုမှုများကို ပိုင်ရှင်က အများဆုံးပြုလုပ်နိင်ခြင်း
ပြင်ဆင်ခွင့် ရှိ ရှိ ရှိ မရှိ မရှိ မရှိ
ဖြန့်ဝေခွင့် ရှိ မရှိ၊ တူညီသောလိုင်စင်အောက်မှာ ရှိ တူညီသောလိုင်စင်အောက်မှာ Often မရှိ မရှိ
လိုင်စင်ချထားပိုင်ခွင့် ရှိ ရှိ မရှိ မရှိ မရှိ မရှိ
ဥပမာ ဆော့ဖ်ဝဲလ် SQLite, ImageJ Linux kernel, GIMP, OBS Windows, စီးပွားဖြစ် ဗီဒီယိုဂိမ်းအများစုနှင့် ယင်းတို့၏ DRMs, Spotify, xSplit, TIDAL Server-side
တိမ်တိုက် ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊
မှုခင်းဆိုင်ရာ အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ
↑ Hancock၊ Terry (2008-08-29)။ What if copyright didn't apply to binary executables?။ Free Software Magazine။ 2016-01-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ PickaLicense, Any License on codinghorror by Jeff Atwood
↑ Larry Troan (2005)။ Open Source fromaProprietary Perspective။ RedHat Summit 2006 Nashville 10။ redhat.com။ 2014-01-22 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2015-12-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုင်စင်&oldid=699713" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။